Cajón de Sastre, dad badan, xiiso badan oo xiiso leh - Ikkaro
Waxyaabaha kale ee xiisaha leh iyo yutiilitida ee aanan hubin sida loo kala saaro, midkoodna mawduuca ayuu ka baxayaa ama maaddaama aysan jirin wax ku filan oo aan weli abuuro qayb aniga ii gaar ah.
Boorsada isku dhafan ee AAN AH balaayo blog. Mawduucyo badan oo mawduuc ka baxsan oo ka baxsan qaybaha blog-ka ugu weyn. Halkan waxaan ka heli doonnaa wax badan oo la xiriira DIY, iyo ikhtiraac.
Sayniska, wararka, xiisaha, wararka been abuurka aan macquul ahayn. Waxaan sidoo kale ka hadalnaa baaskiiladaha, giraangiraha iyo Mashiinnada Goldberg, dokumentiyo, gaagaaban, barnaamijyada NASA oo aad runtii jeclaan doontid.
Fikradda ayaa ah in la abaabulo khaanaddan waqti ka dib oo loo geeyo mowduucyo. Laakiin horey waad u ogtahay ...
Waxaan bilaabay inaan dhajiyo "markale" kanaalka Youtube. Sannadahaan dhexdeeda waxaan uga tagay 12 fiidiyow oo ku saabsan waxyaabo kala duwan, laakiin waxaan bilaabay inaan si joogto ah u daabaco.
Saddexda fiidyow ee ugu dambeeyay ee aan duubay waxay u dhigmaan qoraalo aan sidoo kale ku daabacay barta, laakiin had iyo jeer sidaas ma noqonayso. Fikradda kanaalka YouTube-ka ayaa ah in la buuxiyo macluumaadka ku jira baloogga haddii aan guuleysto, waxaa laga yaabaa inay yeelato nolol u gaar ah. Waxaan rabaa in aan faafiyo waxyaabo gaar ah oo xiise leh laakiin aad ufudud in la helo qoraal aniga ii gaar ah ama kaas oo qaabka fiidiyowgu uga habboon yahay midka qoran.
Hadaad rabto subscribe waad riixi kartaa halkan waxaan nahay ku dhowaad 300 :)
Fiidiyowyadi ugu dambeeyay ee aad ku aragto haddii aad xiisaynayso inaad iska diiwaangeliso waxay ahaayeen:
Hadda haa. Waa isbeddelkii ugu weynaa ee ku dhaca Ikkaro muddo 12 sano ah. Oo bal eeg, wax baan ku qabtay shabakadda iyo webka. Fikir badan kadib, waxaan go aansaday inaan Ikkaro u rogo degel shaqsiyadeed. Illaa iyo hadda wax kasta oo aan daabacay waxay martay shaandho. Wax walba xiriir dhow ayey lahaayeen. Hadda waxyaabo qaar ayaa soo muuqan doona oo ka leexan kara koorsada caadiga ah. Laakiin waan ogahay inay muhiim u tahay sida mawduuca la doortay yahay habka loo wajahayo, habka loo soo bandhigayo iyo joogteynta websaydhka intiisa kale.
Waxaan rabaa in mareegtu aysan noqon dhamaadka laakiin ay u adeegsato qaab ahaan, qalab ahaan. Waxaan rabaa in aan joojiyo dhajinta waxyaalaha aan dhammeeyay si aan u bilaabo adeegsiga si aan u soo uruuriyo macluumaadka ku saabsan waxyaabaha la sameeyo. Fikradaha soo baxa, imtixaanada dhaca.
Maxaan uga sheekayn la'ahay ama hadal aan qof la soo qaatay haddii aan soo saaro waxyaabo xiiso leh? Laga soo bilaabo marka aan Ikkaro ka dhigo websaydhkayga shaqsiyeed, macnaha guud ayaa is beddelaya. Waxaan ku guuleysan doonaa madadaalo.
Ugu dambeyntiina waxaan nahay wax kasta oo aan sameyno, wax kasta oo nagu dhaca oo daneynaya waana wax wanaagsan in halkan laga tarjumo Waxaan horey u mideeyay websaydhada qaarkood iyo mawduucyada aan kala firdhiyey oo durba ku dhexjiray Ikkaro.
Hadiyado gaar ah oo ka yimid boqorro
Had iyo jeer waxaan ku wadaagayaa hadiyadaha boqorrada baloogga, waxay u dhowdahay dhaqan. Nasiib wanaag waxay iga tagaan waxyaabo aan jeclahay, iyaga oo aan weydiisan taasna waxay keenaysaa in laga hadlo baloogga. Haatan laba gabdhood oo 3 iyo 5 sano jir ah marka lagu daro hadiyadayda, kuwaydu waxay bilaabayaan inay noqdaan kuwo aad u xiiso badan.
Sannadkan waxaan go'aansaday inaanan daabicin soo-gelinta, ka dibna waxaan la yaabay maxaa yeelay waxaan u maleynayay inaysan xiiso lahayn, dhowr qof ayaa i weydiiyay arrintaas. Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay iyaga, oo ku saabsan dadkan igu dhiirrigaliyay faallooyinkooda iyo emaylkooda. Waan ka xumahay dib u dhaca ku yimid daabacaadda, laakiin arrimo shaqsiyadeed oo kala duwan awgood hore uma aysan ahayn.
Aynu la aadno wareegga ugu xiisaha badan.
My 85 ″ LCD Writt Tablet LZS8,5 (Guddiga Boggie)
Tani waa sheekada sida si ula kac ah ayaan ku dhammeeyay LCD Writt Tablet. Waan daalacanayay, sida maalin kasta waxaan ku arkay dalab ka yimid Gearbest wixii aan u maleynayay inuu ahaa kiniin dijitaal ah, waxaan nahay Wacom laakiin € 8. Sideed euro !!! Sidii xumaa ee ay ahayd, waxaa haboon in la sameeyo 4 shay oo aan mararka qaar maskaxda ku hayo. Marka waan iibsaday.
Layaabku wuxuu yimaadaa markaan helo oo aan arko inay aad ufiican tahay oo aysan jirin wax ay ku xirto meel kasta, ama ay ku shubato ama wax uun. Markaa waxaan dib ugu noqday feylkii oo haa ... waxaan hayaa miiskayga LCD Writing Tablet, kaas oo degdega waxaan u malaynayaa inuu magacani igu khalday. Qaarkood waxay ugu yeeraan Boggie Board, in kasta oo tani ay tahay summad matalaysa wax soo saarka.
Raadintayda Knolling waxay bilaabmaysaa anigoon ka ogayn sawirada Todd MacLellan iyo buugiisa Waxyaabaha Kala Fogow: Buug jeexjeexan oo loogu talagalay Live Casri ah Sawiradaas qarxay waxay igu kalifeen jacayl, iyo raadinta macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qoraaga waan gartay Knolling oo ah hab abaabul, laakiin sidoo kale qaab farshaxan, si qurux looga sameeyo walxaha maalinlaha ah.
Ka dib sanado badan oo kala-goynta walxaha oo aad uga tagaysay qaybaha wax walba si xor ah ikhtiyaar u ah, waxay noqon kartaa hab aad u xiiso badan oo qurux badan oo lagu sii wado kala-baxa. Way i qancisay.
Diyaarinta a Maqaalka ku saabsan kaleidocycles Waxaan u imid fikradda Kippel oo waan iska caabin kari waayey inaan kula wadaago maadaama ay tahay eray u baahan Abuuraha kasta.
Kippel wuxuu kujiraa sheekada uu qoray Philip K. Dick Androids ma ku riyoodaan Idaha korontada? Xaqiiqdii si fiican ayaa loo yaqaan sida daab orodyahankaQuraafaad, sheeko-curis cilmiyeed iyo filim aan akhriyay sannado iyo sannado ka hor. Hagaag, halkan Kipple wuxuu qeexayaa:
BioCoder, majaladda ku saabsan DIY Bio
Waan lasocday tan iyo dhalashadeedii sanadkii 2013 inkasta oo aan hada haysto tiro badan oo aan aqrinayo, laakiin waxaan durba bilaabay inaan qabsado ;-)
Wargeyska BioCoder, waa joornaal bilaash ah oo ka socda O'Really oo loogu talagalay DIY Bio. Waxaa lagu soo bandhigaa seddexdii biloodba mar iyada oo la adeegsanayo qormooyin ku saabsan DIYBio, DIY laakiin lagu dabaqay bayoolaji, bayoolaji synthetic, injineernimada hidaha, iwm.
Maxaan ugu talinayaa Sababtoo ah habka ugu fiican ee laguugu soo bandhigi karo adduunka Bio DIY, laakiin ka sarreeya dhammaantood maxaa yeelay wuxuu na barayaa tiro aad u tiro badan oo ah mashruucyo cusub iyo aaladaha Open Hardware taasi waxay inaga dhigi doontaa inaan ogaano cabirka iyo muhiimada ay leedahay DIY
Haddii aad ka walwalsan tahay inay tahay mid aad u adag, is daji. Farsamo ahaan ma ahan oo way raaci kartaa dhammaan imtixaannada xitaa haddii aadan adduunkan ka bilaabin, haa, waa Ingiriis.
PCL ama polycaprolactone
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad maqasho magacan, nasiib ayaad ku jirtaa maxaa yeelay maanta waad la yaabi doontaa. PCL waa caag kuleylka kuleylka kuleyliya oo aan gacmaha ku sameysan karno markaan kululeeyno qiyaastii 60ºC taasna way adkaataa xilliga qabowga waxaanan ku celin karnaa hawsha marar badan, boqollaal jeer.
Markay qabowdo, waxay noqotaa mid adag oo adag, ma sameeyo koronto ama kuleyl, waa mid aan sun lahayn oo la baabi'in karo. Waxay umuuqataa xalka ugufiican waxyaabaha aan soo saarnay miyaanay ahayn?
Aniga ahaan wuxuu i xasuusiyaa Sugru, laakiin awood u leh inaad dib u isticmaasho oo waxay umuuqataa inay ka adagtahay wax ka qabashadeedu. In kasta oo dabcan in dib loo isticmaali karo marar badan waa qodob aad muhiim u ah.
Eeg sida sixirku u dhaco….
Xisaabinta si loo dhiso kart guriga lagu sameeyo oo leh leylis koronto
Waqti kahor waxaan Youtube ku arkay fiidiyow, halkaas oo ay ka dhisteen a kart fudud oo macmal ah oo loogu talagalay carruurta isticmaalka sida mootada layliga aan xadhig lahayn.
Makaanikada iyo qaabdhismeedku waa mid aad u fudud, gadaal ayaana arki doonnaa, waa inaad fiirisaa fiidiyowga si aad u ciyaarto, laakiin Maxay tahay layli laygu talagalay inaan isticmaalo? Dhammaantood ma uqalmayaan mise waa inay lahaato ugu yaraan awood?
Kahor intaadan bilaabin iibsiga agabyada iyo sameynta go-kar sidii waali, waxaan sameyn doonnaa xisaab yar oo fudud si aan ugu cadeyno nooca leyliga u adkeysan doono xaaladaha aan ku wajahan nahay. u isticmaal mashiin baabuur koronto ku shaqeeya.